प्रश्न | कोबिड-19 मलेशिया | Kini News Lab | Malaysiakini
कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने बारे अधिक जान्नुहोस्
मलेशिया सरकार द्वारा शरणार्थीहरू र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूका लागि नि: शुल्क परीक्षण गर्ने।
यदि तपाईं शरणार्थीहरुको खोजीमा हुनुहुन्छ भने कृपया जानकारीको लागि तलको मलेसिया को यो न; ०१९७७०४५ मा व्हट्सएप्प वा ( [email protected])मार्फत ईमेल पठाउनुहोस्।
यु अँ एच सी अर संसस्था को संख्या।
सम्पर्क न ;
आपतकालिन सम्पर्क नं; अनि नाता:
घरको ठेगाना ;
तलब आर एम
कुनै समस्याको लागि डाक्टरलाई हेर्दै हुनु हुन्छ ?
तपाई कुनै औषधी लिदै हुनुहुन्छ ? लिदै हुनुहुन्छ भने तपाई दिनमा कति पटक लिनु हुन्छ ?दिनमा एक पटक वा दिनमा दुई पटक ?
मलाई घाँटी दुख्ने / जोरो / खोकी आएको छ। के म कोबिड-१९ को लागि जचाउनु जानु पर्छ ?
प्रश्न : तपाई कोबिड-१९ को बिरामी संग सम्पर्क हुनु भएको छ ?
तपाई कोबिड-१९ को बिरामी संग सगै काम, बसाई या यात्रा गर्नु भएको छ ? वा तपाई स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ जोसले कोबिड-१९ बिरामी संग बिना उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण प्रयोग गर्नु भएन ?
र / वा
प्रश्न : के तपाई यो १४ दिन भित्र विदेश यात्रा गर्नु भएको छ ?
एम वो एच ले तपाईंलाई नजिकको सम्पर्कको रूपमा पहिचान गरेको हुन सक्छ। एम वो एच का अधिकारीहरु लाई संपर्क गर्नुहोस् वा तलको हटलाइनहरूमा कल गर्नुहोस्।
जून १० देखि विदेश बाट आएका व्यक्ति हरु घरमै १४ दिन को लागि क्वारेन्टिन मा बसनु पर्छ।
कोबिड-१९ नहुनु नि सकिन्छ तर संका लाग्यो भने एम वो एच लाई सम्पर्क गर्नुस।
कोबिड-१९ को परीक्षण गरे पछि मलाई के हुन्छ ?
प्रश्न : परीक्षा परिणामहरूको लागि प्रतिक्षा गर्दा,के तपाईं बिरामी महसुस गर्नुहुन्छ वा घर निगरानीको लागि अनुपयुक्त हुनुहुन्छ?
तपाईलाई उपचार र अवलोकनको लागि अस्पतालमा भर्ना गरिनेछ।
तपाइको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर १४ दिनको लागि क्वारेन्टिनमा राखिने छ। तपाइको स्वास्थ्य हेर विचार गर्न स्वास्थ्य कर्मी हरु खटिने छन्।
प्रश्न; तपाईको स्वास्थ्य जाँच भयो , सकारात्मक छ ?
तपाइलाई अस्पताल भर्ना गरिने छ अनि लगातार रुपमा चेक जाँच गरिने छ।
१४ दिन बसी सके पछि मात्र तपाई घर जान सक्नु हुने छ।
तपाइलाई निको नभए सम्म नियेंत्रणमा लिने आर एम सी वो आदेश भनेको के हो थाहा छ ?
जुन महिनाको १० गते बाट सुरु हुने लाइ कोबिड-१९ को हिडडूल गर्न प्रतिबन्ध लगाइने ६ चरण हुन्। तपाई १० जुन पछि हिड डूल गर्न पाउनु हुने छ तर अन्तरास्ट्रिय भ्रमण गर्न प्रतिबन्ध गरिएको । अरु धेरै जानकारीको लागि यहाँ पढ्न सक्नु हुने छ।
आर एम सी वो को नियम राष्ट्र भर नै लागु भएका छन् ?
हो, तर राज्य सरकारले केहि सर्तहरू थप्न सक्छन् त्येसैले तपाइलाई कुनै कुरामा शंका लाग्यो भने कृपया आफ्नो स्थानीय काउन्सिलको साथ जाँच गर्न सक्नु हुनेछ।
मैले आफ्नै गाडीमा वरी परि घुम्न सक्छु ?
हो, MCO अन्तर्गत तपाईंको आफ्नै गाडी चलाउने सम्बन्धमा अघिल्लो प्रतिबन्ध हटाइएको छ।
के म मेरो राज्यमा कतै जान सक्छु?
हो, पहिले एम सी वो को अवधि सकेपछि मे महिनाको ४ गते देखि १० किलो मिटर सम्म जान छुट दिएको हो।
मैले अझै खाने कुरा र आवस्यक पर्ने कुराहरु किनेर राख्नु पर्छ ?
कृपया आवस्यकता पर्ने समान खरीद गर्नको लागि आतंकित नहुनुहोस । सरकारले पर्याप्त मात्रामा किराना समान किन्नको लागि सुविधा युक्त्त स्टोरहरू चाडै खुला रहने आस्वासन दिनु भएको छ।
सुपर मार्केट र दोकान हरुमा भिड भाड बढ्न सक्छ जुन कुराले फेरी रोग बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्येसैले भिड भाड बाट अलग रहनु होस्।रेस्टुरेन्टहरु खोलिने छन् ?
रेस्टुरेन्टहरू खोलिने वाला छ ?
हो, कडा दिशा निर्देशको साथ स्थानीय काउन्सिलले पनि उनीहरूको न्याय क्षेत्रमा रेष्टुरेन्टहरूको लागि थप नया सर्तहरू राख्ने छन् ।
के म रिकभरी आन्दोलन नियन्त्रण अबधिमा मेरो घर छोड्न सक्छु ?
हो, तर तपाईं अझै पनी सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्ने हुन्छ र भीडभाड क्षेत्रबाट टाढा रहन, सार्वजनिक क्षेत्र मास्क लगाउने र तपाइँको हात बारम्बार धोई रहन प्रोत्साहित गरिने छ।
के म एक्लै बाहिर व्यायाम गर्नको लागि जान सक्छु ?
हो, प्रायः खेलकुद हरुमा शरीर सम्पर्क हुने खालको गति बिधि पोखरीमा पौडी खेल्न बाहेकका लागि अनुमति दिइन्छ।
के मनोरन्जन गर्न मिल्ने अरु कुनै व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न अनुमति दिइन्छ ?
मनोरन्जन उद्योगमा केवल फिल्मांकनको लागि मात्र अनुमति छ। अन्य मनोरन्जन व्यवसायहरू जस्तै ; पपहरू, कराओके, गीत गाउने,थिम पार्कहरू वा रात्री कालिन क्लबहरूको अनुमति दिने छैन।
मैले सार्बजनिक ठाउ हरुमा जादा मास्क अनिबार्य लगाउने पर्छ ?
तपाईं लाई सार्वजनिक ठाउ हरुमा त्यसो गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। यो अनिवार्य छ जबसम्म तपाईं लक्षणहरू विकास गर्नुहुन्छवा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
यदि मैले आन्दोलन नियन्त्रण अर्डरको उल्लंघन गरेमा के हुन्छ?
यो अपराध हो। संक्रमण रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रण ऐन ११९८८८ को दफा २, २४ अन्तर्गत तपाईंलाई तत्काल पक्राउ गरिनेछ र मुद्दा लगाइनेछ।तपाईंलाई दोषी ठहरिएमा छ महिनासम्म जेल, आरएम १,००० सम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ।
के मैले मेरो घटनाहरू रद्द वा स्थगित गर्नुपर्दछ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवाह सहित सबै सामूहिक भेला स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ।
मुसलमान धर्म मान्ने हरुको अन्त्येष्टि पछि चाँडै मृतकका लागि विशेष प्रार्थना हुनु आवश्यक छ। मृतकको परिवारका सदस्यहरू र मस्जिद वा सुराउ मण्डलीले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
के म सामूहिक प्रार्थनामा उपस्थित हुन पाउछु ?
धेरै राज्यहरूले नियन्त्रण आदेश (MCO) अन्तर्गत शुक्रवारको प्रार्थना र मण्डलीलाई अनुमति दिने निर्देशन तयार गरेको छ। जुन १३ देखि मलेसिएन परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्नेहरूलाई मात्र मण्डलीको प्रार्थनामा भाग लिन अनुमति दिएको छ। यदि त्यो समुदायमा कुनै पनि बिरामी सकारात्मक भेटिएको छ भने अधिकारीहरूले यो सम्झौता सहजीकरण होस् भन्नको लागी लागु गरेको हो। मे 28 मा सरकारले गैर मुस्लिम पूजा स्थलहरु लाइ पनि खोल्न दिने अनुमति सूची जारी गर्ने छ।
के म बिदामा जानु सक्छु ?
मलेसियन हरुलै बिसेष यात्राको अनुमति छैन तर घरेलु यात्रा मिल्छ।
स्थानीय पुलिस स्टेशनबाट अनुमति लिन आवश्यक छ। यसमा हवाई यात्रा समावेश छ।
जून १० देखि विदेश बाट फराकियेका मलेसियन हरु आफ्नै घर मा १४ दिनको लागि क्वारेन्टिन गर्नु छ त्यो भन्दा अगाडी चै संगरोध केन्द्रमा बस्नु पर्थियो।
त्यो बेला विदेशी हरु लै त्यो देश मा आउनु अनुमति छैन।
मेरो कार्यस्थलमा एक कर्मचारीले कोविड -१९ को सकारात्मक परीक्षण गरे भने के व्यवस्थापनले सञ्चालनहरू बन्द गर्नुपर्दछ ? र हामीले घरबाट काम गर्नुपर्छ ?
मन्त्रालयले तपाइँको ब्यवस्थापनलाई सल्लाह दिने छ कि कुन कार्यको उचित मार्ग हो भनेर, र आजको दिनसम्म प्रभावित क्षेत्र सफा गरियो र व्यवसायका लागि पुनः खोलियो।
पहिलेका केसहरूमा बिरामीसँग जो नजिक सम्पर्कमा भएकाहरू को स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिचान गरेको थियो र उनिहरु लाइ पनि परिक्षण गराएर र क्वारेन्टिन गरिएको छ ।
यदि तपाइँलाई शंका छ भने,तल स्वास्थ्यमन्त्रालयको हटलाइन न; हरूमा कल गर्नुहोस्।
म त्यस्तो व्यक्ति संग नजिक छु जसको कोबिड-19 सकारात्मक परीक्षण गरेको छ। के मैले पनि आत्म-संगरोध गर्नुपर्छ ?
होइन। जसले स्वयं-क्वारेन्टाइन अभ्यास गर्ने सल्लाह दिइन्छ यदि उनीहरूले प्रत्यक्ष परीक्षण गर्ने वा १४ दिनभित्रमाविदेश यात्रा गरेका कसैसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेमा मात्र सिधा सम्पर्क भएकाहरुको पनि परिक्षण गरिनु पर्छ।
तपाई लाइ कुनै शंका लागेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हट लाइन न; मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।
मैले अस्पताल वा क्लिनिकमा जानु पर्छ यदि म कोविड -१९ को सकारात्मक परीक्षण गर्ने कसैसँग मेरो सम्पर्क भएको थियो भने ?
तपाई क्लिनिक वा अस्पतालमा जानको लागि हतार नगर्नुहोस् ।
तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको मन्त्रालयको हटलाइनमा सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईंले जाँच लिनु भयो भने यो प्रारम्भिक स्क्रीनिंग स्वास्थ्य सेवाले तनाव कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
के सार्वजनिक यातायातहरु संचालन भएको हो ?
मे ४ देखि सबै सार्वजनिक यातायातहरु सामान्य रुपमा पुन; संचालन गरिने छ ।
एम वो एच स्वास्थ्य मंत्रलाय
एम वो एच च्यानल
सम्भव भएसम्म अन्य व्यक्तिहरूबाट कम्तिमा एक मिटरको दूरी कायम गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सार्वजनिक यातायातमा हुनुहुन्छ भने, आफ्नो अनुहार अरूबाट टाढा राख्नुहोस। विशेष गरी यदि कोहि खोकी रहेको छन भने वा रुघा मार्गी लागेको भएमा ।
कोविड -१९ भाइरस कसरी फैलिन्छ
अर्को व्यक्ति संक्रमित हुन सक्छ यदि तिनीहरु भुइमा बस्छन वा छुन्छन् र त्यसपछि तिनीहरुको अनुहार छुन्छ।सतह र तापक्रमको प्रकारको आधारमा भाइरस दुई घण्टा वा धेरै दिन सम्म बस्न सक्छ।
संक्रमण बाट कसरि बच्न सकिन्छ।
मास्क लगाउनुहोस् यदि तपाईं सँग लक्षणहरू देखा परेको छन् भने । मास्क नियमित रूपमा परिवर्तन गर्नुहोस् र मास्क राखे पछि त्यसलाई नछुनुहोस्।यदि तपाईंले छुनु भयो भने तुरुन्तै आफ्नो हात धुनुहोस्।
नियमित रूपमा पानी र साबुनले आफ्ना हात धुनुहोस्, वा यदि यो सम्भव छैन भने,कम्तिमा ६०% रक्सीको साथ ह्यान्ड स्यानिटाइजर् प्रयोग गर्नुहोस्।
कीटाणुनाशक समान हरु छुइएको भए राखेको भए नियमित रूपमा सतहहरूलाई खाली गर्नुहोस्।
← ट्र्याकरमा फर्किनुको लागि
किनी संचार माध्यमले मार्च १०,२०२० प्रयोगशालामा प्रकाशित गरेको।
परियोजनाको मुख्य भूमिका निर्वाह आइडिला रजाक, लि लोङ्ग हुइ र वोङ्ग काइ हुइले गर्नु भएको छ।
सामग्री निर्माता : आइदिल रजाक , ली लोंग हुइ अनि वोंग कै हुइ हुन्।
यु एक्स योजना बनाउने सीन हो
विकास कर्ता : ठेगा राज सेर्वाई अनि ली लोंग हुइ।
दृष्टान्त : स्यरिमान बदृल्ज़मन
स्रोत: स्वास्थ्य मन्त्रालय बाट।
अनुवादक; लोजी लिम्बु ,नु नु नखुम अनि अबु हायत एम डी रफिकुल रिज्भी।
प्रशिक्षार्थी;कओ जिया यी अनि इलिना नताशा अहमद खुशानी।
इमेल द्वारा प्रतिक्रिया दिनुहोस।
भबिस्यमा तपाई हाम्रो कुनै पनि आयोजना सम्बन्धि जानकारी लिनु हुन्छ भने हाम्रो इमेल सुचीमा जोड़िनुस।
इमेल गर्ने ठेगाना*
हामी लाइ मदत गर्नुहोस
तपाई लाइ हामीले के गरेको मन पर्छ ? जस्त्तै कुनै नया परियोजना बुस्ट एप्प / उधारो वितिय कारोबार ?
स्वोतन्त्र संचार माध्येमहरु लाइ मदत गर्नुस। सदस्यता सुल्क पर महिना आर एम २० अथवा बार्षिक आर एम २०० मात्र।